जब रेखाले नेशनल टिभीमा भनिन्: ‘म विवाहित पुरुषसंग प्रेममा छु’
Homeसमाचारजब रेखाले नेशनल टिभीमा भनिन्: ‘म विवाहित पुरुषसंग प्रेममा छु’
April 4, 2021 admin समाचार 5939
प्रसिद्ध बलिउड अ’भिनेत्री रेखा यो हप्ता इन्डियन आइडलको मञ्चमा उपस्थित भइन्। रेखा यस कार्य’क्रममा विशेष पाहुनाका रूपमा आएकी थिइन र उनको सुन्द’रता, नृत्य र रमाईलो स्टाइलले सबैको मन जित्यो। यति मात्र होइन, रेखाले होस्ट जय भानुशा’लीको प्रश्नको जवाफ पनि यसरी दिइन् की सबै छ’क्क परे ।
शोको नयाँ प्रोमो सार्व’जनिक गरिएको छ । जसमा रेखाले आफ्नो प्रेम जाहेर गरेकी छन् । यस प्रोमोमा जय भा’नुशाली, रेखा र नेहा कक्कड़को एक भिडियो सार्व’जनिक गरेका छन् । , जयले रेखा र नेहालाई सोधे रेखा जी, नेहू, तपाईले कुनै महिलालाई कुनै मान्छेको लागि यति पागल भइरहेको देख्नु’भएको छ, जुन पुरुष अझै विवाहित हो ?
जवा’फमा, रेखाले तुरुन्तै जवाफ दिइन्, मलाई सोध्नुहोस्, उनको मुख वाट यस्तो शब्द अनायास निस्कि’एपछि जयले उनको कुरा बmुझे । अनि तत्काल रेखाले भनिन् , मैले केहि भनेकी छैन र मलाई नहेर । रेखाको कुराकानी र उनको शैली यति हास्या’स्पद थियो कि जय भानुशाली र नेहा कक्कर हाँस्न थाले। दुबैलाई थाहा थियो कि रेखाले कसको बारेमा कुरा ग’रेकी हुन् ।
कि रेखाले यस विशेष एपि’सोडमा प्रतियोगीहरूसँग धेरै रमाईलो गरेको पनि देखिएको छ । उनले पवनदीप र दानिशको अभिनयको प्रशंसा गर्दा पवन’दीपसँग ढोलक मागेर त्यसको पनि प्रतिभा देखाएकी छन् । यस बाहेक, रेखाले भने कि उनी पवनदीपलाई अपना’उन चाहन्छिन।
गीत र प्रशं’साको अतिरिक्त, रेखा आफ्ना गीत’हरुवाट सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाइन् । उनी नाचेर पनि सबैको मन जितिन् । रेखाले निर्णायकहरू र प्रतियोगीहरूको लागि धेरै उपहारहरू लिएर आएकी थिइन् । उनले निर्णायक नेहा कक्क’ड़लाई साडी उपहार स्वरूप विवाहको शगुनको रूपमा दिइन्। नेहा साडी पाउँदा एक’दम खुसी भइन् र रेखाको आशिष् पनि लिइन् ।
सावधान रहनु’होस् कि रेखा बलिउडको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीहरु मध्ये एक भएको छ। उनले आफ्नो अभिनय र नृत्य प्रतिभाको आधा’रमा हिन्दी सिनेमामा छाप छोडे। उसको व्य’क्तिगत जीवन पनि विवादहरूको घेरामा परेको थियो। रेखा अन्तिम पटक याम’ला पगला दीवाना ाष्mि फिल्ममा देखीएको थियो। फिल्ममा, उनले एक गीतमा अ’भिनय गरे। इताजा खबरबाट
आखिर किन छु’टे गायिका पूर्णकला र कुशल ? सुन्दा स’बैको आखामा आँसु
गायक पशुपति शर्मालाई के भयो, अ’चानक गरियो अस्पताल भर्ना ? (हे’र्नुहोस् अभिनित भिडियो)
उर्लाबारी प्र’करण- दाइको न्यायका लागी जे गर्न पनि तयार छु भन्दै बहिनी स’डकमा (भि’डियो सहित)
February 22, 2021 admin समाचार 6336
गत पुस ५ गते म’,ृत फेला परेका उर्लाबारी ६ का ३१ वर्षीय युवा प्रवीण बास्तोलाको ह,त्या भएको भन्दै मृ’तकका परिबार आन्दो’लित बनेका छन् । आइतबार प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी ह’टाएपछि
असोज ५ गते बाट लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान गर्ने सरकारको निर्णय
September 15, 2020 admin समाचार 14061
गत बर्षको चैत ११ गते’देखि बन्द रहेको लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक ह’वाई उडान असोज ५ गतेदेखि सञ्चाल’नमा आउने भएका छन । मन्त्रिपरिषद्को’ सोमबार साँझ प्रधान’मन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको बैठकले बन्द रहेका लामो दूरीको याता’यात
पुनः आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान रो’क्ने तयारी, भारत सहितका देशमा उडान ब’न्द गर्न सिफारिस !
May 1, 2021 admin समाचार 6537
कोभिड संकट व्यवस्था’पन केन्द्र (सीसीएमसी)ले कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित १० मुलु’कबाट नेपालसँग हुने सीधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफा’रिस गरेको छ । सीसीएमसीको शु’क्रबार बेलुका बसेको बैठकले मुलुकभित्र कोरोनाको संक्रमण भयावहरुपमा फैलिएको निष्क’र्ष निकाल्दै आन्तरिक